I-Sociology of Conscription - Isiqendu seStat
Sciences soLuntu Intshayelelo kwiNkcubeko
I-Sociology of Consumption
Indlela abaLwazi beNzululwazi abasondela ngayo kunye nokuSetyenziswa koMsebenzi kwiLizwe la namhlanje
Inzululwazi yokusetyenziswa iyinkqutyana yentlalo ngokuqaphela ngokusemthethweni yi-American Sociological Association njengeCandelo labathengi kunye nokuSebenzisa. Ngaphakathi kweli nqanaba, izazinzululwazi zibona ukusetyenziswa njengento ephambili ebomini bemihla ngemihla, ubunjani kunye noluntu loluntu kwiinkcubeko zangoku kwiindlela ezigqithiseleyo kumgaqo-siseko woqoqosho kunye nokufunwa.
Ngenxa yobukhulu bayo kubomi bezenhlalakahle, izazinzululwazi ziyabona ubudlelwane obubalulekileyo kunye obufanelekileyo phakathi kokusetyenziswa kunye neenkqubo zezoqoqosho kunye nezopolitiko, kunye nokuhlaliswa koluntu, ubulungu beqela, ubunikazi, ukucaciswa, kunye neemeko zentlalo .
Ukusetyenziswa koko kudibene kunye nemibandela yamandla nokungalingani, kubalulekileyo kwiinkqubo zentlalo zentsingiselo yokwenza , ezisekwe kwingxoxo yezopolitiko ezungeze isakhiwo kunye ne-agency , kunye nesimo esichaphazela ukusebenzisana kwamaninzi kwimihla ngemihla eninzi yoluntu kunye neendlela .
Inzululwazi yokusetyenziswa yinto engaphezulu kwesenzo esilula sokuthenga, kwaye siquka uluhlu lweemvakalelo, iimpawu, iingcamango, ubungqina kunye nokuziphatha okujikeleza ukuthengwa kweempahla kunye neenkonzo kunye nendlela esisebenzisa ngayo thina kunye nabanye. Le nxalenye yentlalo iyasebenza kwiNyakatho yeMerika, eLatin America, eBrithani nakwilizwekazi laseYurophu, e-Australia kunye ne-Israel, kwaye ikhula eChina naseIndiya.
Izihloko zophando ngaphakathi kwentlalo yoluntu zibandakanya kwaye azithethi:
Indlela abantu abadibanisa ngayo kwiindawo zokusetyenziswa, njengezitolo zorhwebo, izitalato, kunye nezithili ezisemntla;
Ubudlelwane phakathi kobuqu bomntu ngamnye kunye neentengiso zabathengi kunye nezikhala;
Ziziphi iindlela zokuphila ezidibeneyo, ezichazwe, kwaye zichithwe kwii-hierarchies ngokusebenzisa iinkqubo zabathengi kunye nolwazi ;
Iinkqubo zokuguqulwa kwamanani, apho iimveliso zabathengi, iinkqubo kunye neendawo zidlala indima ephambili ekuhlaziyweni kwakhona ngokobuhlanga kunye noluntu lwezithili zoluntu, iidolophu nezixeko;
Ixabiso kunye neengcamango ezifakwe kwiintengiso, ukuthengiswa kunye nokupakishwa kwemveliso;
Ubudlelwane ngabanye kunye neqela kwiimveliso;
Imiba yokuziphatha ehlangene kwaye iphinda iboniswe ngokusetyenziswa , kuquka ukugcinwa kwemvelo, amalungelo kunye nesithunzi sabasebenzi kunye nokungalingani koqoqosho;
Kwaye, umsebenzisi wabasebenzi kunye nabemi, kunye ne-anti-consumerism and lifestyles.
Oomathathu "ootata abasungula" bezenzo zenzululwazi zanamhlanje babeka isiseko sobungqina bentlalo yoluntu. U-Karl Marx wanikezela ngolu hlobo olusetyenziswe ngokubanzi nangendlela esebenzayo "ye-fetishism yempahla," ebonisa ukuba ubudlelwane bezenhlalakahle zabasebenzi bafihliwe yimpahla yabathengi ezithwala ezinye iintlobo zexabiso elifanisayo kubasebenzisi babo. Le ngcamango isetyenziswa rhoqo kwizifundo zabathengi kunye nolwazi. Umbhalo kaEmile Durkheim onomxholo, inkolelo yezinto eziphathekayo kumxholo wenkolo uye wabonakala uncedo kwi-sociology yokusetyenziswa, njengoko ikwazisa iingxelo malunga nokuba unobumba bunxulumene njani nokusetyenziswa, kunye nendlela iimpahla zabathengi zidlala indima ebalulekileyo kwizithethe nakwimihango ejikeleze Umhlaba. UMax Weber ubhekiselele kwimpembelelo yempahla yabathengi xa ebhala ngokubaluleka kokubaluleka kwabo kubomi benhlalakahle ngekhulu le-19, kwaye banikezela oko bekuya kuba ngumlinganiselo othe ngqo kuluntu lwabantu abathengi, kwi -Protestant Ethics and Spirit of Capitalism .
Ingxubusho yobawo abasungula, ingxoxo yaseMelika Historical uT Thorstein Veblen "yokusetyenziswa ngokugqithiseleyo" iye yachaphazela kakhulu indlela abahlali befunda ngayo ukubonisa ubutyebi kunye nesimo.
Iingqungquthela ezibalulekileyo zaseYurophu ezisebenzayo kwiminyaka yeshumi elinamanci mabini zanikezela neembono ezixabisekileyo kwi-sociology yokusetyenziswa. Incoko kaMax Horkheim kunye noHedoror Adorno incoko "kwiCandelo lezoNkcubeko" linikeze i-lens eyimfuneko yokuqonda ukuqonda imilinganiselo yezobupolitika, ezopolitiko kunye nezoqoqosho. UHerbert Marcuse wacacisa ngokucacileyo kule ncwadana yakhe encwadini ethi One-Dimensional Man , apho ichaza imimandla yaseNtshona kunokuba isisombululo sezithengi zabathengi, kwaye ngokunjalo, kunika izixazululo zemakethe yintoni ngokwenene ezopolitiko, inkcubeko kunye noluntu iingxaki.
Ukongezelela, intando yenzululwazi yaseMerika kaDavid Riesman, i- The Lonely Crowd , yabekwa isiseko sendlela abahlali beza kuhlola ngayo indlela abantu abafuna ngayo ukuqinisekiswa kunye noluntu ngokusebenzisa ukusetyenziswa, ngokujonga nokuzibophelela ngomfanekiso wale nangoko.
Ngoku kutshanje, izazinzululwazi ziye zamkela iingcamango zentlalo yaseFransi yeYean Baudrillard ngengcamango ngemali engumfuziselo yempahla yabathengi, kwaye ithathe ngokungathí sina ibango lakhe lokuba ukubonwa kokusetyenziswa njengendawo yonke yomntu kuphelisa i-politics yeklasi emva kwayo. Ngokufanayo, uphando lukaPerre Bourdieu kunye nokwahlula ukwahlula phakathi kwempahla yabathengi, kunye nendlela aba babonakalisa ngayo kwaye bavelise inkcubeko, iiklasi, kunye nokuhlukana kwezemfundo kunye nezikhundla zemisebenzi, liyintloko yamatye eentlalo zentlupheko yanamhlanje.
Abaqapheli beeNkcazo zeeNkcazo kunye noMsebenzi wabo
I-Zygmunt Bauman: Iipolismologists zasePoland ezibhale ngokubanzi malunga nokuthengwa kunye nomphakathi wabathengi, kuquka neencwadi zokuThengwa koBomi ; Umsebenzi, Abathengi kunye neTshaba elitsha ; kwaye Ngaba Iimpawu Zokuziphatha Ziba Nethuba Kwilizwe Labathengi?
URobert G. Dunn: i-theorist yasekuhlaleni yase-American ebhale incwadi ebalulekileyo yecandelo labathengi elibizwa ngokuba yiNkcitho yokuThengisa: Izifundo kunye nezinto eziMbutho wabathengi .
UMike Featherstone: isazi senzululwazi yaseBrithani esabhala iNkcubeko yabathengi kunye namaPosmistism , kwaye ngubani obhala ngokubanzi malunga nendlela yokuphila, ihlabathi, kunye ne-aesthetics.
ULaura T. Raynolds: UProfesa woluntu kunye nomlawuli weZiko loRhwebo oluLungileyo kunye noNyunyana kwiIyunivesithi yase-Colorado State uye wapapasha amanqaku amaninzi kunye neencwadi malunga neendlela ezifanelekileyo zokurhweba kunye nezenzo, kubandakanywa ne- Trade Trade Fair: Imingeni yokuguqulwa kwehlabathi .
UGeorge Ritzer: Umbhali weencwadi ezininzi ezinempembelelo, iMcdonaldization of Society kunye nokuchithwa kwehlabathi elixhatshaziweyo: Ukuqhubeka kunye noTshintsho kwiiKedhedrals of Consumption .
I-Juliet Schor: I-Economist kunye neenzululwazi ebhalile uluhlu lweencwadi ezikhankanywe ngokubanzi malunga nomjikelezo wokusebenza kunye nokuchitha kwimimandla yase-Amerika, kuquka i -Overspent yaseMerika , i -Overworked American , kunye neNkcazo: I-Economics entsha yePhysical Real.
U-Sharon Zukin: I-sociologist yase-Urban kunye noluntu eshicilelwe ngokubanzi, kunye nombhali weSixeko esiMnyama: Ukufa nokuPhila kweeNdawo eziLungileyo zeeNdawo , kunye ne-intanethi ebalulekileyo, "Ukusebenzisa Ubungqina: Kuvela kwiiNgxowankulu zoMahluko kwiNdlela yokuKhutshwa."
Ukufunyanwa koluphando olutsha oluvela kwintlalo yolondolozo luhlala lupapashwa kwiNcwadi yeNkcubeko yabathengi kunye neNcwadana yoPhando lwaBathengi.
Ndingayazi Njani Ukuba I-Sociology Inkulu Ikulungele Kum?
Indlela yokubhala i-Abstract in Socialology
Inkolelo yokuBambisana yokuBambisana: iMbali, uPhuhliso, kunye nemizekelo
Ukuqonda ukuBambisana kwiNkcubeko
Oko Kufuneka Ukwazi Ngokweengalingani Zezoqoqosho
I-Sociology of Race and Ethnicity
I-Socialology yeNtlalo yokungalingani
I-Biomes yomhlaba: i-Grasslands enomhlaba
Uyi-Actor: Own It!
Amalungelo oLuntu, iiNkundla zeNkundla eziPhakamileyo, kunye neMisebenzi
I-Cosmos Isiqendu 3 Ukujonga iphepha lokusebenzela
Ixesha elide kunqoba kwiiKholeji zeBhola leKholeji
Iilwimi zesiTaliyane: Qinisekisa
Ukubhala Isizathu kunye neempembelelo zeeNtsha zabafundi zesiNgesi
Biography kaJoseph Maria Morelos
I-Eastern Kentucky University Admissions
I-Dorm Life Life College: Yintoni i-RA?
Amazwe amaninzi amaninzi angama-2100
I-Biography kaJulius Kambarage Nyerere